လုပ်ငန်းတစ်ခု စတင်ဖို့ – Gentleman Magazine
စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်တွေမှာ စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ဖို့ သင်းတွေ ပေးနေကြပေမယ့် တကယ်မှာတော့ ကျောင်းတွေမှာ ဘာမှ သင်ကြားမပေးနိုင်ပါဘူး။ အခြေခံသဘောတရားတွေကို လေ့လာနိုင်ပေမယ့် အောင်မြင်မှုရဲ့ ဥပဒေသတွေက ဘယ်ကျောင်းကမှ လိုက်မမှီအောင် ပြောင်းလဲတိုးတက်နေကြလို့ပါ။ သင် ကျောင်းမှာ လေ့လာနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးအရာကတော့ ဘယ်လို လေ့လာရမလဲ ဆိုတာပါပဲ။
ကျွန်တော် တွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့ အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေ အားလုံးလိုလိုကတော့ လေ့လာမှုကို အရမ်း စူးစိုက်တတ်ကြပြီး ဈေးကွက်ပြောင်းလဲမှုကို ပြသနာလို့ မမြင်ကြပဲ သူတို့ကို အများအရှေ့ရောက်အောင် တွန်းပို့နိုင်မယ့်အရာအဖြစ် မြင်ကြပါတယ်။ ချမ်းချမ်းသာသာနေဖို့ကို နောက်ထားကြပြီး ခေါက်ဆွဲပြုတ်တစ်ထုပ်နဲ့ တိုက်ခန်းထဲမှာ နေကြသူတွေပါ။
တစ်ဦးတစ်ယောက်ခြင်းစီအမြင်နဲ့ စီးပွားရေးပြောင်းလဲမှုအကြောင်း လေ့လာစရာ ကိစ္စတွေ အများကြီး ရှိတတ်ပြီး အချိန်တိုင်းမှာ အခွင့်အရေးဆိုတာ ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းရှင်လောင်းတွေအတွက် သိထားသင့်တဲ့ အရေးပါဆုံး ခြေလှမ်းခြောက်ခုကတော့
၁. အရင်လုပ်ခဲ့ဘူးသူတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပါ
လုပ်ငန်းရှင်လောင်းတွေဟာ သူတို့ အိုင်ဒီယာတွေအကြောင်းကိုပဲ ပြောချင်ကြပြီး အခြားသူပြောတာကို နားမထောင်ချင်ကြပါဘူး။ စကားပြောတာ ဘာမှမရပါဘူး။ နားထောင်မှရတာပါ။ လုပ်ဖူးတဲ့ဝါရင့်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာစီးပွားရေးအကြောင်း ပြောပြချင်ပေမယ့် သင်က မေးမှ သူတို့က စိတ်ပါလက်ပါ ပြောပြမှာပါ။
၂. ခုလောလောဆယ်မှာ အောင်မြင်နေတဲ့ အကြောင်းတွေနဲ့ လူတွေကို လေ့လာပါ
အင်တာနက်ဟာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ Update ဖြစ်နေလို့ အကောင်းဆုံး လေ့လာလို့ရတဲ့ နေရာပါ။ သင် ကြိုက်တဲ့ Blog တွေနဲ့ စီးပွားရေးဇာတ်လမ်းတွေအတွက် တစ်နေ့ကို အချိန်နည်းနည်းပေးထားပါ။ လူမှုကွန်ရက် အကောင့်တွေကို Follow လုပ်ပါ။
၃. မိတ်ဆွေတစ်ယောက်၊ စီးပွားရေးလမ်းပြတစ်ယောက် ရှာပါ
မိတ်ဆွေက သင် လုပ်ချင်တာကို သင်နဲ့ပြောဖို့ ဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးလမ်းပြက သင် လုပ်သင့်တာကို ပြောဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဖက်စလုံးက စကားတွေကို သင်လိုအပ်ပြီး ကွာခြားချက်တွေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရပါမယ်။
၄. ဘယ်လို လေ့လာရမလဲဆိုတာ သင်ကြားပေးတဲ့ အတန်းတွေကို လက်မလွှတ်ပါနဲ့
ကိစ္စအရပ်ရပ်ကိုလေ့လာတာ၊ အသင်းလိုက် လေ့ကျင့်တာ စတဲ့ အတန်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ သင် ခုချိန်လိုနေတာတွေနဲ့ ကိုက်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေကို အာရုံစိုက်လေ့လာထားပါ။ သင် နောင်တစ်ချိန်ကျ ဘာလိုမလဲဆိုတာ သိမှမသိတာ။
၅. သင် စိတ်ဝင်စားတဲ့ အသင်းအဖွဲ့တွေမှာ အခမဲ့ ဝင်အလုပ်လုပ်ပါ
အရာအားလုံး ကောင်းကျိုးလုပ်နေရတဲ့ လူမှုကူညီရေး ပါတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်ရတာထက် သင့်ရဲ့ အခြားသူနေရာက မြင်နိုင်စွမ်းနဲ့ အမှန်တကယ်ဖြစ်နေတဲ့ အရာတွေကို သိနိုင်စွမ်း တိုးတက်စေတာ မရှိပါဘူး။ ငွေကြေးဖိအားတွေ မရှိပဲနဲ့လဲ ခေါင်းဆောင်မှု အတွေ့အကြုံရနိုင်ပြီး အသစ်တွေကို လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်။
၆. သင့် ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်လေးတစ်ခုကို စလုပ်ပါ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်လေးတွေဟာ ကုန်ကျစရိတ် နည်းပါတယ်။ အခွန်လဲ အရမ်းပေးစရာ မလိုပဲ Web Creation Tool တွေလဲ အလကားရပြီး မိုဘိုင်းဖုန်း App တွေတောင် အလကား လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ကြီးကြီးမားမားမလုပ်ခင် သေးသေးလေးနဲ့ အတွေ့အကြုံ ရအောင် ယူထားပါ။
ကိုယ့်ဘာသာ လေ့လာဖို့ဆိုတာ လူတိုင်းအတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ သင်တန်းတွေမှာပဲ စီးပွားရေးလုပ်နည်းတွေ လေ့လာရတာ ကြိုက်တယ် ဆိုရင်တော့ သင့်ကို လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်လုပ်ဖို့ အကြံမပေးချင်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီလို စနစ်တကျ လေ့လာဖို့ အချိန်မပေးနိုင်လို့ပါ။
နောက်ဆုံး သင် ဘာကြောင့် လုပ်ငန်းရှင် ဖြစ်ချင်လဲဆိုတဲ့ တွန်းအားက အရေးကြီးပါတယ်။ သင်က ငွေရှာရ လွယ်ချင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အခုလက်ရှိ အလုပ်ဖိအားတွေက လွတ်ချင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆိုရင်တော့ သင် စိတ်မပါရင် ဘာမှ မလေ့လာနိုင်တာ သတိပြုပါ။ သင်သာ လေ့လာရတာ ကြိုက်နှစ်သက်ရင်တော့ သင်လဲပဲ အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
စီးပှားရေးတက်ကသိုလျတှမှော စှနျ့ဦးတီထှငျ လုပျငနျးရှငျဖွဈဖို့ သငျးတှေ ပေးနကွေပမေယျ့ တကယျမှာတော့ ကြောငျးတှမှော ဘာမှ သငျကွားမပေးနိုငျပါဘူး။ အခွခေံသဘောတရားတှကေို လလေ့ာနိုငျပမေယျ့ အောငျမွငျမှုရဲ့ ဥပဒသေတှကေ ဘယျကြောငျးကမှ လိုကျမမှီအောငျ ပွောငျးလဲတိုးတကျနကွေလို့ပါ။ သငျ ကြောငျးမှာ လလေ့ာနိုငျတဲ့ အကောငျးဆုံးအရာကတော့ ဘယျလို လလေ့ာရမလဲ ဆိုတာပါပဲ။
ကြှနျတျော တှခေဲ့ဖူးတဲ့ အောငျမွငျတဲ့လုပျငနျးရှငျတှေ အားလုံးလိုလိုကတော့ လလေ့ာမှုကို အရမျး စူးစိုကျတတျကွပွီး ဈေးကှကျပွောငျးလဲမှုကို ပွသနာလို့ မမွငျကွပဲ သူတို့ကို အမြားအရှရေ့ောကျအောငျ တှနျးပို့နိုငျမယျ့အရာအဖွဈ မွငျကွပါတယျ။ ခမျြးခမျြးသာသာနဖေို့ကို နောကျထားကွပွီး ခေါကျဆှဲပွုတျတဈထုပျနဲ့ တိုကျခနျးထဲမှာ နကွေသူတှပေါ။
တဈဦးတဈယောကျခွငျးစီအမွငျနဲ့ စီးပှားရေးပွောငျးလဲမှုအကွောငျး လလေ့ာစရာ ကိစ်စတှေ အမြားကွီး ရှိတတျပွီး အခြိနျတိုငျးမှာ အခှငျ့အရေးဆိုတာ ပျေါလာနိုငျပါတယျ။ လုပျငနျးရှငျလောငျးတှအေတှကျ သိထားသငျ့တဲ့ အရေးပါဆုံး ခွလှေမျးခွောကျခုကတော့
၁. အရငျလုပျခဲ့ဘူးသူတှနေဲ့ ဆကျသှယျပါ
လုပျငနျးရှငျလောငျးတှဟော သူတို့ အိုငျဒီယာတှအေကွောငျးကိုပဲ ပွောခငျြကွပွီး အခွားသူပွောတာကို နားမထောငျခငျြကွပါဘူး။ စကားပွောတာ ဘာမှမရပါဘူး။ နားထောငျမှရတာပါ။ လုပျဖူးတဲ့ဝါရငျ့လုပျငနျးရှငျတှဟောစီးပှားရေးအကွောငျး ပွောပွခငျြပမေယျ့ သငျက မေးမှ သူတို့က စိတျပါလကျပါ ပွောပွမှာပါ။
၂. ခုလောလောဆယျမှာ အောငျမွငျနတေဲ့ အကွောငျးတှနေဲ့ လူတှကေို လလေ့ာပါ
အငျတာနကျဟာ နစေ့ဉျနဲ့အမြှ Update ဖွဈနလေို့ အကောငျးဆုံး လလေ့ာလို့ရတဲ့ နရောပါ။ သငျ ကွိုကျတဲ့ Blog တှနေဲ့ စီးပှားရေးဇာတျလမျးတှအေတှကျ တဈနကေို့ အခြိနျနညျးနညျးပေးထားပါ။ လူမှုကှနျရကျ အကောငျ့တှကေို Follow လုပျပါ။
၃. မိတျဆှတေဈယောကျ၊ စီးပှားရေးလမျးပွတဈယောကျ ရှာပါ
မိတျဆှကေ သငျ လုပျခငျြတာကို သငျနဲ့ပွောဖို့ ဖွဈပွီး စီးပှားရေးလမျးပွက သငျ လုပျသငျ့တာကို ပွောဖို့ ဖွဈပါတယျ။ နှဈဖကျစလုံးက စကားတှကေို သငျလိုအပျပွီး ကှာခွားခကျြတှကေို နှိုငျးယှဉျကွညျ့ရပါမယျ။
၄. ဘယျလို လလေ့ာရမလဲဆိုတာ သငျကွားပေးတဲ့ အတနျးတှကေို လကျမလှတျပါနဲ့
ကိစ်စအရပျရပျကိုလလေ့ာတာ၊ အသငျးလိုကျ လကေ့ငျြ့တာ စတဲ့ အတနျးတှေ ပါဝငျပါတယျ။ သငျ ခုခြိနျလိုနတောတှနေဲ့ ကိုကျတဲ့ အခှငျ့အလမျးတှကေို အာရုံစိုကျလလေ့ာထားပါ။ သငျ နောငျတဈခြိနျကြ ဘာလိုမလဲဆိုတာ သိမှမသိတာ။
၅. သငျ စိတျဝငျစားတဲ့ အသငျးအဖှဲ့တှမှော အခမဲ့ ဝငျအလုပျလုပျပါ
အရာအားလုံး ကောငျးကြိုးလုပျနရေတဲ့ လူမှုကူညီရေး ပါတျဝနျးကငျြတဈခုမှာ အလုပျလုပျရတာထကျ သငျ့ရဲ့ အခွားသူနရောက မွငျနိုငျစှမျးနဲ့ အမှနျတကယျဖွဈနတေဲ့ အရာတှကေို သိနိုငျစှမျး တိုးတကျစတော မရှိပါဘူး။ ငှကွေေးဖိအားတှေ မရှိပဲနဲ့လဲ ခေါငျးဆောငျမှု အတှအေ့ကွုံရနိုငျပွီး အသဈတှကေို လလေ့ာသငျယူနိုငျပါတယျ။
၆. သငျ့ ကိုယျပိုငျ စီးပှားရေးလုပျငနျးငယျလေးတဈခုကို စလုပျပါ
စီးပှားရေးလုပျငနျးငယျလေးတှဟော ကုနျကစြရိတျ နညျးပါတယျ။ အခှနျလဲ အရမျးပေးစရာ မလိုပဲ Web Creation Tool တှလေဲ အလကားရပွီး မိုဘိုငျးဖုနျး App တှတေောငျ အလကား လုပျနိုငျပါသေးတယျ။ ကွီးကွီးမားမားမလုပျခငျ သေးသေးလေးနဲ့ အတှအေ့ကွုံ ရအောငျ ယူထားပါ။
ကိုယျ့ဘာသာ လလေ့ာဖို့ဆိုတာ လူတိုငျးအတှကျ မဟုတျပါဘူး။ သငျတနျးတှမှောပဲ စီးပှားရေးလုပျနညျးတှေ လလေ့ာရတာ ကွိုကျတယျ ဆိုရငျတော့ သငျ့ကို လုပျငနျးရှငျတဈယောကျလုပျဖို့ အကွံမပေးခငျြပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီလို စနဈတကြ လလေ့ာဖို့ အခြိနျမပေးနိုငျလို့ပါ။
နောကျဆုံး သငျ ဘာကွောငျ့ လုပျငနျးရှငျ ဖွဈခငျြလဲဆိုတဲ့ တှနျးအားက အရေးကွီးပါတယျ။ သငျက ငှရှောရ လှယျခငျြလို့ပဲ ဖွဈဖွဈ၊ အခုလကျရှိ အလုပျဖိအားတှကေ လှတျခငျြလို့ပဲ ဖွဈဖွဈ ဆိုရငျတော့ သငျ စိတျမပါရငျ ဘာမှ မလလေ့ာနိုငျတာ သတိပွုပါ။ သငျသာ လလေ့ာရတာ ကွိုကျနှဈသကျရငျတော့ သငျလဲပဲ အောငျမွငျတဲ့ လုပျငနျးရှငျတဈယောကျ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
Previous: တစ်ဦးတည်သော အချစ်ဆုံးသူဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်သည့် လက္ခဏာ(၁၀)ခု
Next: သူမ ပန်းလေးကို ထိကိုင်ဖို့ နည်းလမ်း ၁၆ ခု